UMBONISO BHANYABHANYA KAJENNIFER LOPEZ 'WEHUSTLERS' USEKWE KWIBALI ELINYANISEKILEYO LENENE - UBOMI
Ibali eliyinyani emva kweJo's New Hustlers 'Movie iya kukukhwankqisa
UJames DevaneyImifanekiso kaGetty
Itreyila bhanyabhanya entsha kaJennifer Lopez, Hustlers , ikhutshwe izolo. Inika uluhlu lwe-A kubandakanya uConstance Wu, uLili Reinhart, uCardi B, uLizzo, kunye nokuninzi.
J.Lo iinkwenkwezi njengoSamantha Barbash, owayekhokele iqela labasetyhini ekudibaniseni amadoda azizityebi angamawaka eedola kwiiklabhu ze-NYC.
Hustlers iya kuqala ngoSeptemba 13, 2019.
Izolo kusasa, uJennifer Lopez wabelane erhuqwayo Kwimovie yakhe ezayo Hustlers Kwi-Instagram yakhe . Ukuba awuqhelananga ne-hype ngasemva Hustlers, iyelenqe lihle kakhulu: Isangqa sabasetyhini siqhatha amadoda azizityebi aseWall Street ukuba achithe amawaka eedola kwiiklabhu zemicu — boyisiwe ziziyobisi, utywala, kunye namantombazana ashushu. I-cast iheha, nayo, inenkwenkwezi kungekuphela kweLopez kodwa uLili Reinhart, uConstance Wu, uCardi B, uLizzo, kunye nokunye.
Kodwa ibali elingemva Hustlers ayisiyonto inde. Endaweni yoko, isekwe kwiziganeko zobomi bokwenyani ezithi kwavela ityala ngokuchasene nabasetyhini abane kumatyala aliqela okwenziwa iyelenqe, ubungcungcu obukhulu kunye nokukhohlisa. Injalo loo nto, phaya ngo-2008, iqela lamakhosikazi-uSamantha Barbash, uRoselyn Keo, uKarina Pascucci, noMarsi Rosen — babamba abanye babanini bebhanki abazizityebi, abaphathi be-hedge fund, oogqirha namagqwetha kwisiXeko saseNew York.
Aba baxhaphazi basebenzise amadoda aseWall Street ukuba achithe amakhulu amawaka eedola kwiiklabhu ezahlukeneyo ze-NYC, epokothisa abambalwa kuyo ngobusuku. Nantsi kanye indlela abayenze ngayo.
indlela yokuphelisa i-hemorrhoid
Ubusuku beeklabhu zikhokelela kwimali enkulu.
Kudliwanondlebe kunye Sika , Owayesakuba ngu-hustler 'Rosie' Keo, odlalwa nguConstance Wu kwifilimu ezayo, uxelele uJessica Pressler eyona nto iyehla kwiiklabhu ezinje ngeFlash Dancers kwindawo yeXesha, iLarry Flynt's Hustler Club, kunye neRoadHouse Gentlemen's Club eQueens.
Kwakungo-2008, kanye emva kokuwa kweStock Market, kwaye amadoda aseWall Street ayebuyekeza ngokuchitha ixesha lawo kunye nemali kwiiklabhu zemigca eManhattan. Ikhuthazwe luthotho lwe-HBO's 2000 G Umtya weeDivas , URosie wafumana umsebenzi kwiLace Gentlemen's Club eNew Jersey, esenza i $ 500 ukuya kwi-1, 000 yeedola ebusuku. Efuna ukufumana nangakumbi, wafudukela eManhattan, apho wadibana khona noSamantha Barbash (okwabizwa ngokuba nguSamantha Foxx), a wobuweyitara kwiklabhu yamanqaku e-Chelsea.
Nje ukuba aba hustler bahlangane njengeqela, kwavela umbono wokongeza 'ukufefa nje' kwe-MDMA kunye ne-ketamine kwiziselo zabaxhasi, ngokwe Sika . Amantombazana aya kuthi emva koko azise la madoda kwenye yeeklabhu zemicu, apho azonwabisa khona ubusuku bonke achithe amawaka. 'Kuvakala kukubi kakhulu ukuba sithi, iziyobisi abantu, uxelele Sika . Kodwa bekufana, kuyinto eqhelekileyo. Kwakukho noonongogo abakhutshelwa ngaphandle ababesabelana ngesondo kunye nabanye babathengi, ngelixa umfazi okhokelayo eya kuthi akhathalele ukuqinisekisa ukuthengwa kwabathengi kwifowuni neenkampani zamakhadi etyala.
UJose Perez / uBauer-GriffinImifanekiso kaGetty
Isebenzile ... de ayenza.
Amadoda aya kuvuka engenakukhumbula kubusuku obungaphambili kwaye ajongane noBarbash malunga neebhili zabo ezinkulu, kuphela ukuba abaqinisekise ukuba bahlawule ngokuzithandela kwaye banobusuku obumnandi. Isebenzile. 'Yiyiphi enye idola engama-20 000 eyongezelelweyo kubo?' URosie uxelele Sika.
ingakanani i-potassium kwibhanana
Amantombazana ayesenza imali eninzi, ethenga iimoto zodidi kunye neengxowa zomyili , kodwa yayikukungcakaza okwabangela ukungqubana ngaphakathi kokuziphatha. URosie uthe waqala ukubuza indlela yokuziphatha kweqela nokuba lilungile okanye hayi. Ngobunye ubusuku, uKoo wathi indoda ethe bayisebenzisa iziyobisi yawa kwaye yafumana isiphithiphithi, kwaye enye indoda eyayinonyana one-autistic yaphangwa i-17,000 yeedola. 'Ndiza kuthi ngaphakathi,' Ndizokwenza i-100 enkulu kwaye ndihambe, 'uxelele Sika . Ndiza kwenza i-100 ibe likhulu, emva koko, 'ndiza kwenza elinye ikhulu. Ndizakufikelela kwisiqingatha sesigidi ndimke. Hayi, ngoku ndifuna ukwenza isigidi ndimke. ' Kwakunganele. '
Ubuqhetseba ekugqibeleni bufikelele esiphelweni emva kokuba iqela lamadoda liye kwiSebe lamaPolisa laseNew York laze laxela iiakhawunti zabantu ababethenga iziselo zabo beba nemali yabo. Amagosa e-NYPD aqala ukuthandabuza xa amadoda esiya phambili, becinga ukuba banokuchitha imali eninzi kwiiklabhu. Kodwa emva kokuba ugqirha wentliziyo uZyad Younan uxelele i INew York Post ukuba wasebenzisa iziyobisi emva kokuchitha i-135,000 yeedola kwiklabhu yokuqhawula amanqaku, abaphandi abavela kuLawulo lwezoNyanzeliso lweziyobisi baphonononge iiteyiphu zokhuselo baqonda ukuba unyanisile.
Kwi-2014, i-NYPD ibambe uBarbash, uKeo, uPascucci, uRosen, bonke abalivumanga ityala phambi kweNkundla ePhakamileyo yoMbuso eManhattan, ngokwe INew York Times . UCarmine Vitolo, ongomnye wabaphathi beRoadHouse Gentlemen’s Club, naye wabanjwa etyholwa ngobugqwetha obukhulu kunye nokuceba iyelenqe emva koko wakhululwa ngaphandle kwebheyile.
Kwiminyaka emithathu kamva, uBarbash ulivumile ityala kwaye wafumana iminyaka emihlanu yovavanyo. UKeo wenza isibongozo ngoMatshi 2016 kwaye akazange anikwe xesha lokuvalelwa. U-Pascucci no-Rosen bagwetywa ngeempelaveki entolongweni ze emva koko bavalelwa iminyaka emihlanu ngo-Januwari ka-2016. UVitolo wagwetyelwa ukulingwa.
Hustlers Umboniso bhanyabhanya uyakuboniswa kuqala kokuwa.
Namhlanje, uRosie ngumama kwaye ngekhe onwabe ngakumbi ngokuzayo Hustlers ifilimu. I-Instagram yakhe igcwele iifoto zokwazisa Hustlers Iziganeko, ngamanye amaxesha nge Ama-Asiya aTyebileyo aTyebileyo Inkwenkwezi uConstance Wu, odlala indawo yakhe. Ubhala incwadi malunga nebali lakhe, ngokwe-Instagram yakhe.
Ngakolunye uhlangothi, umlingiswa kaJ.Lo uBarbash, akonwabanga kangako ngemovie, kwaye uxelele INew York Post ukuba uceba ukumangalela umdlali weqonga. 'Siyamisa ngoba uyandichaza kakubi. Andizange ndihluthe. Kukungcoliseka komlingiswa, uxelele iphephandaba. Libali lam elenza imali ngalo. Ukuba ufuna ukudlala nam, ngewayelifumene ibali lokwenyani. '
Hustlers ibetha indawo zemiboniso ngoSeptemba 13.
Hlala uhlaziyiwe kwimpilo yakutshanje exhaswa yisayensi, impilo yomzimba kunye neendaba zesondlo ngokusayinela incwadi yeThintelo.com Apha . Ukuzonwabisa okongeziweyo, silandele I-Instagram .
Intsingiselo yokomoya 444
Yindlebe uphawu lwe-covid